डा. गोविन्द केसीको अनशन १४औँ दिनमा, कस्तो छ अवस्था::News from Nepal
डा. गोविन्द केसीको अनशन १४औँ दिनमा, कस्तो छ अवस्था
काठमाडौं २९ असार । जुम्लामा १४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार बिहीबार केसीको मुटुमा समस्या देखिएको हो ।
अनशनरत डा. केसीले माग पूरा नहुँदासम्म जुम्लामै बस्ने बताएका छन् । बुधबार र बिहीबार सरकारले केसीलाई ल्याउने प्रयास गरे पनि उनकै अडानका कारण सरकारी प्रयास सफल हुन सकेन । सरकारले केसीलाई काठमाडौं ल्याएर संवाद गर्ने बताएको छ । तर, जुम्लामा माग पूरा गरेर मात्रै काठमाडौं फर्किने उनको अडान छ । ‘माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं जाने मनस्थितिमा केसी हुनुहुन्न,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले सरकारले काठमाडौं लाने भन्ने विषय टाढाको कुरा हो ।’ नयाँपत्रिकामा खबर छ ।